Rarama Pirate Bay - Download mimhanzi, mafirimu, emahara!
Nzira Dzakanakisisa dzeKuita Chiitiko Chako paPirate Bay [Yakawedzerwa Kubvumbi 2019]
Nguva inogona kuve yakaganhurana, asi zvakare ine mutserendende. Kune mazuva chete akawanda kwazvo atinofanira kushandisa isu pano kwepasi. Kumirira parukova runononoka hakufanire kunge tiri kushandisa nguva dzino.
Pirate Bay ine mukurumbira wekupa nekukurumidza uye nekukwanisika kuwana kune izvo zvaunoda. Mukurumbira uyu ndewe nekuti vanhu vazhinji vanobatsira pakukora uye kurongedza maitiro nguva dzose, vachibatsira kuumba nharaunda yevashandisi vane pfungwa dzakafanana vanotsigirana.
Unogona kuwana zvimwe nezvePirate Bay pano kana usinga zive pachikuva: https://www.thepiratebay.wiki.
Paunosangana nerukova runononoka, zvinogona kunge zvichikonzerwa nekushomeka kwevaita seeders kana varombo faira remukati. Kune wevhareji mushandisi, nyaya haisi paPirate Bay. Zviri pamwe netaipi yavanayo kumba.
Nzira Dzanyanya Kunatsa Dzako Yekukurumidza Kumhanyisa
Izvo zvakakosha kuti urangarira kuti kurodha nekumhanyisa mhanyisa iyo ISP yako inokuteedzera iwe panguva yekutengesa kwavo gomba inoratidza iwo akakwana iwe aunokwanisa kuwana. Nzvimbo zhinji hadziwanzosvika pedyo neizvi zvakashambadzirwa mitengo. Sezvo mutemo wenguva dzose wegunwe, ipfungwa yakanaka kuraira dzinosvika makumi mashanu neshanu zvinokurumidza kupfuura zvaunofunga kuti zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti unokwanisa kuwana ruzivo rwakanyanya.
Izvi zvinoreva kana iwe uchifunga kuti makumi mashanu nembiri inokurumidza kukwana kuti isangane neInternet yako yekumhanyisa, saka unofanirwa kusarudza makumi manomwe neshanu Mbps panzvimbo.
Izvo zvakakoshawo kuyeuka kuti MBps neMbps akasiyana mazita. Kana iwe uine 1.44 MBps, saka ndiyo yakaenzana neanosvika 11.5 Mbps. Kubatanidza iyo "B" zvinoreva kuti wave kuchinja kubva megabits kuenda megabytes sekondi.
Paunenge uchimhanyisa kumhanya kwako, saka heano dzimwezve nzira dzekuvandudza ruzivo rwako paPirate Bay.
1. Tarisa Yako Router uye Modem
Kana iwe uchinge uchiona inononoka Internet kubatana, ipapo modem yako inogona kupomera. Ndechipi chinhu chekutanga chaunoita kana iwe ukasangana nekudonha kwe data? Unogadzirisa modem. Kana izvo zvikasashande, iwe unovhura iyo router, wozoidzosera mukati zvakare. Ungangoda kukwidziridza zvishandiso izvi kana ukaona zvichiramba kubhururuka kana uchizara.
2. Tarisa yako system
Iwe unoziva here kuti inguva yekupedzisira riini kuti iwe wakasarudzira mavhairasi pane yako system? Malware, mauto, uye zvimwe zvinhu zvisingadiwe zvinogona kumwaya zviwanikwa zvemakomputa yako. Kana izvo zvikaitika, kumhanya kwako kunorwadza semhedzisiro. Zvinogona kubatsira kuita scan yezuva nezuva, kunyanya kana iwe uchirodha marejista kazhinji.
3. Deredza kupindira pane yako system.
Iko kune chigadzirwa chinonzi Webroot chinoshanda paMac ®. Kana ichiita basa, saka inokanganisa kukanganisika pane system kuti hauchakwanise kushandisa mabasa ekudaira. Iwe unofanirwa kuvhara iyo software kubvumira kuti inzwi rekutanga hwindo riwedzere kumusoro. Pane akati wandei mapurogiramu uye mapuratifomu ayo angave achikonzera kukanganiswa neyekuburitsa maitiro kana Internet yekumhanya.
4. Uchiri kumhanyisa firita here?
Kana iwe uri pane iyo DSL yekubatanidza pane Broadband yeInternet yako, saka mhando yefaera rako inogona kunge iri nyaya. Kuvhiringidzika kunoitika pamutsetse kunogona kukonzera kudonhedza kamwe kamwe, kumanikidza iwe kubatanidzazve. Rimwe dambudziko mune aya chaiwo mamiriro ekufunga nezve kuvepo kwefoni isina waya. Edza kuenda nekuzvipima bvunzo kuti uone kana imwe chete danho iri kuumba matambudziko auri kusangana nePirate Bay.
# 5. Iwe une ISP block pane saiti.
Mamwe ma ISPs anovharira puratifomu yose paunoyedza kuwana Iyo Pirate Bay. Vamwe vanoshanda kuvharidzira izvo zvavanofungidzira kuti zvakabvumiranwa. Kana iwe ukasangana nemamiriro ezvinhu aya, saka zvinogona kubatsira kuedza imwe yemasaiti egirazi anoshanda: https://tpb.wiki/.
# 6. Gadzira kubatana kwakananga.
Kana iwe uri kushanda pasina waya paunenge uchisvika kuPirate Bay, saka yako yekumhanyisa mhanyisa ichagara ichinonoka zvishoma. Iwe uchazoda kuyedza kubaya yakananga modem pachinzvimbo kana uine tambo iyo yakareba kuti igokwanisa kutora iyi sarudzo. Wobva waedza kuwana ino shanda girazi rinoshanda rePirate Bay muna 2019 kuti uone kana paine nzvimbo yekuita yebasa ISP: Pirate Bay.
Panogona kunge paine zvimwe zvinokanganisa kufunga nezvazvo. Dzimwe mhando dzekare dzeTV bhokisi dzinogona kukanganisa yako Internet, kunyangwe kana vanga vasiri kuwana chero zviwanikwa. Kureba kana zera rekambo dzako kunogona kunetsekana futi. Panogona kuve nekukanganiswa kwekunze pamwe nezvimwe zvako zvemagetsi zvigadzirwa.
Paunenge uchinge waronga nyaya dzinogona kunge dziri kuvharidzira yako yekukurumidza kumhanyisa kumhanya, ipapo iwe uchave uchikwanisa kunakidzwa nezvose zvakanaka torukova zvinopihwa izvo Pirate Bay inopa zuva rega rega.